Ukukhanya kwezimoto kuvela ezikhombiseni eziqinile, ezingavamile ukushintsha. Kuze kube manje, abashayeli abaningi banesithakazelo esithile kuma-optics e-LED. Kunemihlomulo eminingi engavumelekile ukuba isondele kule ngxenye ngezixazululo ezihlukile. Noma kunjalo intuthuko yezobuchwepheshe ayimi, kancane kancane umqondo ohlukile kakhulu wokuhlinzekwa kokukhanya uthola ukuthandwa. Lezi yizicabha ze-laser, ezethula izimfanelo ezintsha ezisemqoka ekuhleleni ukusekelwa kwe-optical yemoto yanamuhla.
Isimiso sokusebenza kwe-laser optics
Uma imithombo yendabuko yokukhanya kwezimoto njengama-incandescent ama-LED nama-standard ahlinzeka, ngandlela-thile, imisebe enamandla, khona-ke laser ikhiqiza i-monochrome nokuhlakazeka okuhambisanayo. Lokhu ikakhulukazi ngenxa yezinzuzo zobuchwepheshe. Naphezu kwalokhu, lo mklamo uphinde usekelwe kumadidi, ngenxa yokuthi izibani zamasosha zisebenza. Isimiso sokusebenza kwama-optics anjalo sisekelwe ekutheni i-laser ayisenzi njengomthombo wokukhanyisa, kodwa njengengxenye yokunikezwa kwamandla. Ukukhanya, kusekhona ama-diodes amathathu okukhanya okukhanyayo anezinto eziqukethe i-phosphorus. Leli qembu lisekela i-laser futhi lakha i-light of light nemigomo edingekayo.
Phakathi nokusebenza kwanoma yiliphi ukukhanya, ama-athomu womuthi osebenzayo asebenzisa amandla, ahlinzeke ama-photons emkhiqizo. Ikakhulukazi, isibani esilasayo sokuqala sine-tungsten filament eveza ukukhanya njengoba ivuselela ugesi. Izinguquko ekusetshenzisweni kwamandla kagesi kuye kwaholela ekugqibeleni ukuthi ukukhanya kwekhanda kwe-laser kunganikeza amandla, okuyizinkulungwane ezingaphezu kwezikhathi ezingaphezu kwamandla okukhanya kwezibani ze- xenon.
Impendulo enhle emakhasini laser
Ubuchwepheshe obusha buhlinzekela izinzuzo eziningana kuma-optics wezimoto. Njengoba sekushiwo kakade, ngisho nase-xenon yanamuhla, lokhu kukhanya kuzozuzisa emandleni. Futhi umthengi uqinisekisa lokhu. Ngakho-ke, umkhuba wokusebenzisa ubonisa ukuthi amandla esistimu ye-laser aphindwe izikhathi eziningana kunaleyo yama-halogen yendabuko nama-LED. Izibalo ezinembile kakhulu zibonisa ukuthi izikhwama ze-laser zikwazi ukusebenza ngamamitha angu-600 ngaphambili. Uma kuqhathaniswa, ukukwazi okuphezulu kokukhanya kokushayela okuvamile kufike ku-400 m.
Kodwa ngisho nangezimfanelo ezisemqoka zokusebenza yiyona inzuzo enkulu ye-laser light. Umthombo onjalo, ngenxa yesimiso esikhethekile sokusebenza, wenza lula izinqubo zokulawula i-light of light. Abambalwa abasebenzisi, ikakhulukazi, bakwazi ukuhlola uhlelo lokulawula oluhlakaniphile lwakamuva lokukhanya kwe-laser okunamandla. Kodwa-ke, ngokusho kochwepheshe, lesi siqondiso sokuthuthukiswa kwe-optics sithembisa amathuba amaningi amasha. Kunelungelo lokusho ukuthi ezinhlotsheni zakamuva zezimoto zaseJalimane, izikhwama ze-laser zigxila ekungeneni kokudla okufana nephunga. Ngakho-ke, uhlelo luhamba ngokuzenzekelayo ezindaweni eziyingozi, zigxile kuzo ukunakekelwa komshayeli.
Izinzuzo ezibonakalayo namanje azibandakanyi izikhathi ezimbi zokusebenza kwezingqimba ze-laser. Ukungalungi kungenxa yezici ezifanayo ama-LED. Ngakho-ke, abasebenzisi babhala ukuthi kwezinye izimo ukukhanya kuyimpumputhe kakhulu kubashayeli abazayo futhi ngokujwayelekile akujwayele, okungaphazamisa abanye abashayeli. Ngaphezu kwalokho, ekuguqulweni okukhona, ukukhanya kwe-laser kubiza kakhulu futhi lokhu kuyiphuzu elibalulekile, kunikezwa ukuthi akusiyo njalo isithunzi sabo kubalulekile.
Kunezigaba ezimbili zabakhiqizi bama-headlamps. Ngakolunye uhlangothi, ubuchwepheshe obunjalo buqondakala ngokwemvelo ngabakhiqizi bemoto. Intuthuko ephumelele kakhulu engxenyeni iboniswa yi-Audi ne-BMW. Yiqiniso, i-laser optics ayibonakali kaningi emamodeli amaningi - imishini enjalo ivame ukutholakala njengesixazululo sokuzikhethela. Ngakolunye uhlangothi, izikhwama ze-laser zikhiqizwa ngabathuthukisi abakhulu bezobuchwepheshe be-LED. Singazibona izinkampani zika Philips, Osram noHella, ezithatha isikhundla esiphambili emkhakheni wokwakha izinhlelo ezintsha zokukhanyisa. Okuthakazelisayo ikakhulukazi ukuthi kuzo zombili izigaba zenkampani, ama-niche niches athatha ama-niches akhethekile kakhulu, akhuthaza izixazululo eziyingqayizivele kwezobuchwepheshe.
Ungenza kanjani ukukhanya kwe-laser ngezandla zakho siqu?
Ekukhiqizeni okugcwele kwe-laser headlamp nezici zezinkulumo ezingenhla akunakwenzeka, kodwa isingeniso esincane samadidi walolu hlobo ku-optics yezimoto singanikeza umphumela omuhle. Ngakho-ke, abanikazi abaningi basekhaya banikeza inqubo yokukhiqiza i-laser pointer ukuze kube nokukhanya, okuyisisekelo esingaba yi-diode evela ku-DVD-RW drive. I-laser ihlanganiswe ku-niche ye-stoplight noma i-antifog headlight ngokulungiswa kwe-borrow nge-welding ebandayo. Ukuze unciphise ubude bokusakaza, ungasebenzisa i-stencil, eyophinda isakhiwo segoli elifunayo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala ukwakhiwa, kufanele unqume izici ukuthi izibani ze-laser kufanele zibe nazo. Ngezandla zakho, isisekelo sokulungisa singenziwa ngekhadibhodi, sishiya iwindi lesayizi elifanele. Ngokujwayelekile, izingqungquthela zenziwe kusukela ekubalweni kokuthengiswa kwensimbi ku-1.5m, uma nje kunikezwa ukulinganisa kwamamitha angu-4.
Ezindaweni ezihlukahlukene zokuthuthukiswa kwezobuchwepheshe kwezimoto kunezinqubo zokusungulwa okusebenzayo kwezinhlelo zengqondo. Ukucushwa okubonakalayo, ngisho nasezizukulwaneni zanamuhla, kuklanyelwe ngokugcizelela kakhulu ekuqinisekiseni izici eziyisisekelo zokunikezwa kokukhanya. Izakhiwo ezibonakalayo zemisebe sezivele zitholwe nge-LEDs ejwayelekile. Kanti, izibani zokukhanyisa kwe-laser zokukhanya kwekhanda, kanye nokwandisa ukusebenza kwe-optics nazo zavumela abathuthukisi ukuba bazi kahle futhi izimiso ezintsha zokulawula ukukhanya. Akukatholakali ekukhiqizeni okuningi, kodwa ngezibonelo zemoto, izinkampani ezihola zibonisa izibonelo ezimangalisayo ze-laser headlight automation. Ngokusho kochwepheshe, ukusebenza kule ndlela akufanele nje kuthuthukise ukusebenzisana komshayeli ngezibani, kodwa futhi ngokuvamile kuthuthukise i-ergonomics yomshini kanye nezinga lokuphepha.
Izimpendulo zabanikazi: "Renault Koleos" - isisombululo esihle sedolobha
Siya eholidini baya eTallinn
Switzerland - ke ... Uhlobo Lomsebenzi "Switzerland": umlando, izici professional kanye amaqiniso athakazelisayo
Ububanzi-non-elikhiqizayo: incazelo, izici
Ukuphrinta lalezi zincwajana
Amathuba Photo akupheli, ucwaningo kuncike